ဖုန်းမှာ Notification တက်တိုင်း မီးလင်းပေးမယ့် EMBRACE လက်ပတ် – Myanmar Mobile App Edition: Myanmar | ပြည်တွင်းပြည်ပမုိုဘိုင်းသတင်းများ
Themes Collection For Windows7and 8 4G,CDMA,GSM,WIFI Coverage maps for android Root Call Blocker Pro v1.8.3.30 (2.66MB) Beat the Boss2(17 ) v1.6 Apk Game (42.28 Mb) The Pirate Bay Browser Premium v5.4.3 Apk (2.52 Mb) Home
Published On: Sat, Mar 16th, 2013 ပြည်တွင်းပြည်ပမုိုဘုိုင်းဖုန်းဆုိုင်ရာသတင်းများ | By သက်နိုင်စိုး ဖုန်းမှာ Notification တက်တိုင်း မီးလင်းပေးမယ့် EMBRACE လက်ပတ်
Bluetooth Device တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဖုန်းမှာ Application install လုပ်ထားရင် ဖုန်းမှာ ဘာထူးခြားချက်ပဲရှိရှိ အလင်းရောင် လင်းနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Android, iOS ဖုန်းတွေတိုင်းမှာ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Incoming Calls, Text Messages, Email, Install program, Twitter, Tumblr, Facebook, LinkedIn, Skype, Calendar Alerts (Birthdays, Reminders, etc.), Alarm and Timer, Low phone batteryr များအတွက် အလင်းရောင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းနဲ့မိမိ ဝေးသွားပြီ ဆိုရင်လည်း အလင်းရောင် လင်းလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက် ထိခိုက်မူမရှိဘဲ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး လုံခြုံရေးအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ အရောင်စိတ်ကြိုက် ရွေးနိုင်ပြီး အကွင်းပုံစံကို စိတ်ကြိုက် ရွေးနိုင်ပါတယ်။ ပုံစံသုံးမျိုး ထုတ်လုပ်ထားကြောင်း သိရပါတယ်။
Ref & Credit to Smart News
4 comments on “ဖုန်းမှာ Notification တက်တိုင်း မီးလင်းပေးမယ့် EMBRACE လက်ပတ်”	tyne on March 16, 2013 at 3:30 pm said:
where can i buy it n how much?
Reply ↓	xylar on March 16, 2013 at 6:04 pm said:
It’s still the project. Not for commercial sale till now.
Reply ↓	tyne on March 18, 2013 at 7:53 am said:
Reply ↓	win min oo on March 18, 2013 at 7:50 am said:
phone myint moe on FL Studio Mobile V1.0.5 Apk+OBB-(123Mb)aung tint on Y200 (U8655) root လုပ်နည်းpyae phyoe on HUAWEI Y220T ROOT လုပ်နည်းyume on iPhone/Pad/Pod ထဲမှတိုက်ရိုက် Apple ID အသစ်လုပ်နည်းLM on Huawei U 8500 ကို root လုပ်မယ်…ဗားရှင်းမြှင့်မယ်….(Custom) Android Development